उच्च प्रदर्शन पेंट होमोजिनाइजर्स - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक मिक्सरहरू एकरूपता, फैलाव, र तरल पेन्ट फॉर्म्युलेसनको नक्कलको लागि एक भरपर्दो उपकरण हो। अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजरहरूले अत्यधिक स्थिर, समान रंगको इमुल्सन र फैलाव उत्पादन गर्दैन, तर अल्ट्रासोनिकेटरहरू पिग्मेन्ट्स, नानोमेटेरियल र प्राथमिक कणहरूलाई मिल र पीस गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजर्सको क्षमताको विस्तृत श्रृंखलाले अल्ट्रासोनिकेटर्सलाई सबैभन्दा परिष्कृत पेंट मिक्सिंग उपकरणहरू उपलब्ध गर्दछ।
पेंट होमोजेनाइजेशन, फैलाव, र इम्शन
होमोजेनाइजेसन स्थिर उच्च-गुणवत्ताको इमुल्सन र फैलावको उत्पादनलाई सजिलो बनाउन ठोस वा थोपाको कण आकार घटाउन लागू गरिन्छ। रंग, कोटिंग्स, र वार्निशको निर्माणमा, समान रंगको कण आकार र col्ग, परिणामहरू र र behavior वा कोटिंग फर्म्युलेसनको कार्यक्षमतामा परिणामहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।
अल्ट्रासोनिक पेन्ट होमोजिनाइजरहरू फैलावट र पायस सूत्रहरूका लागि
अल्ट्रासोनिक उच्च-कतरनी मिक्सर एकरूपता, पायसीकरण र घनत्व अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श हो, जहाँ कण वा ड्रपलेट आकार र वर्दी वितरण र paint प्रदर्शन र गुणवत्ताको लागि महत्वपूर्ण छ।
अल्ट्रासोनिकेसन होमोजिनाइजेसनको रुचाइएको टेक्नोलोजी हो किनभने उच्च शक्ति अल्ट्रासाउन्डको गहन ध्वनी cavation अणुहरू विश्वसनीयतापूर्वक माइक्रोन र नानो-दायरामा एक समान कण वितरण गर्न को लागि तोड्न सक्षम छ। अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजेसन नानो- र माइक्रोन आकारको कणहरू उत्पादन गर्ने सबैभन्दा परिष्कृत प्रविधि हो। कणको आकार (उदाहरणका लागि, pigments, तेल, waxes, additives आदि) लाई अल्ट्रासोनिक तीव्रताको सहि मात्रा लागू गरेर व्यक्तिगत रूपमा समायोजित गर्न सकिन्छ।
यसबाहेक, अल्ट्रासोनिक फैलावले पिगमेन्टको सतहमा परिवर्तन हुन सक्छ जसको परिणामस्वरूप विस्तारै फैलाव स्थिरता हुन्छ।
औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर UIP16000 (16kW) पेन्टहरू र न्यानोफिलरहरूको उत्पादनको लागि
को लागी अल्ट्रासोनिक पेंट Homogenizer
पानीमा आधारित पेन्टहरू
विलायक आधारित पेंटहरू
उच्च रंगद्रव्य लोडि .हरू
चमकदार पायस पेंटहरू
suspoemulsion (निलम्बन र पायस को मिश्रण)
नानो कण additives
Nanofillers को अल्ट्रासोनिक फैलाव
नानो साइज फिलरहरू कोमलिंगहरू जस्तै पोलीमर वा रेजिनमा समावेश छन्। त्यस्ता नानोफिलरहरूले यान्त्रिक गुणहरू सुधार गर्न सक्दछन्, उदाहरणका लागि यूवी प्रतिरोध, स्क्र्याच प्रतिरोध, कठोरता र केही सामग्रीहरूको टेन्सिल शक्ति। परम्परागत माइक्रोन आकारको फिलरहरू र न्यानो साइज फिलरहरू बीचको मुख्य भिन्नता उच्च विशिष्ट सतह अनुपात हो र यसैले नानोफिलरहरूको पूर्ण परिवर्तन सुविधाहरू हुन्। नानोमेटेरियल्स (उदाहरण, न्यानो-स्केल फिलरहरू) समान रूपमा पेन्ट वा कोटिंग फर्म्युलेसनमा वितरित हुनुपर्दछ, ताकि पूर्ण सतह क्षेत्र यसको वरिपरिको म्याट्रिक्ससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। मात्र जब एकल तितरबित नानो कणहरु को रूपमा वितरित, नानोफिलरहरु आफ्नो असाधारण भौतिक गुण व्यक्त गर्न सक्दछ। अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजर र डिस्पेररहरू उत्कृष्ट मिश्रण टेक्नोलोजी हुन्, डिट्याangle्ग, डिग्लुमेरेट र समान रूपमा नानोफिलरहरू न्यानोफिलरहरूलाई मैट्रिक्समा (उदाहरणका लागि, पोलीमर, epoxies वा रेजिन)। अल्ट्रासोनिक कतरनी सेनाहरूले अन्तर कण सम्बन्ध तोड्ने भएकोले, हरेक कण एकल मैट्रिक्समा छरित हुन्छ र यसको पूर्ण गुणहरू enfolds। यसैले, अल्ट्रासोनिक फैलाव र होमोजेनाइजेशन उच्च प्रदर्शन कोटिंग्सको उत्पादनको लागि सबैभन्दा भरपर्दो विधि हो।
लेटेक्स Emulsion को अल्ट्रासोनिक फैलाव
यद्यपि लेटेक्स पेंटहरू तयार गर्न सबैभन्दा जटिल पेन्ट फॉर्म्युलेसन होईन, यो अझै सावधानीपूर्वक तयार गर्नुपर्दछ र ल्याटेक्स फर्म्युलेसनका सबै अवयवहरू चयनित क्रममा थप्नु पर्छ। पहिलो तयारी चरणमा, आधारभूत र paint्ग निलम्बन तयार छ। तसर्थ, पिगमेन्टहरू पानीमा भिजेको एजेन्टहरू, एन्टिफोमि agents एजेन्टहरू र विशिष्ट बनाना नुस्खाको लागि आवश्यक अन्य additives को साथ पानीमा तितरबित हुन्छन्। टाइटेनियम डाइअक्साइड (TiO2) पिगमेन्टहरू सामान्यतया पहिले फैलिन्छन् र त्यसपछि विस्तारक र pig्ग थपिन्छ। धेरै सूत्रहरूको लागि, यी यौगिकहरूको थप्नको क्रम र मापन एक आवश्यक, गुणस्तर-प्रभावकारी कारक हो। अधिकतर, उच्च-वेग ब्लेड / रोटरी मिक्सरहरू, जुन ल्याटेक्स इमुल्सिफिकेशनको सबैभन्दा परम्परागत विधि हो, कणहरू भिजाउन र फैलाउन प्रयोग गरिन्छ। ब्लेड वा रोटरी मिक्सरको साथ, लगातार आधार सूत्रको मिक्सिंग समय खपत गर्ने प्रयास हो। त्यस पछि ल्याटेक्स इमुल्सन मिश्रणमा थपियो र मिक्सिंग उर्जाको महत्वपूर्ण तल्लो स्तरले समावेश गर्दछ। लेटेक्स इमुल्शन्स कोलसेस वा ब्रेकको खतरामा हुन्छ र हल्का homogenizing अवस्थाको आवश्यक हुन्छ। पहिले नै पूर्व-तितर बितर मोटाइनेहरू त्यसपछि अन्तिम ल्याटेक्स पेन्ट इमल्सनको स्निग्धतालाई चाहिएको दृढतामा समायोजन गर्न थपिन्छन्।
अल्ट्रासोनिक वितरक लेटेक्स इमुल्शन्सको तयारीलाई सजिलै र विश्वसनीयताका साथ ह्यान्डल गर्न सक्छ। Sonication उर्जा र यसैले फैलाउने तीव्रता विभिन्न तयारी चरणहरु को emuslization र homogenization समायोजित गर्न सकिन्छ, सामग्री को अपघटन वा ल्याटेक्स पचास को बिच्छेद विश्वसनीयपूर्वक रोक्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक फैलाव पूर्ण पाउडर भिजेको लागि एक सिद्ध तकनीक हो। सामाग्री, आदि को क्रम को क्रम मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आदर्श समायोजित अल्ट्रासोनिक उर्जा इनपुटले रंगद्रव्यहरूको पूर्ण र expression्ग अभिव्यक्तिलाई अनुमति दिन्छ र उच्च गुणवत्ताको लेटेक्स इमल्शन पेन्टमा परिणाम दिन्छ।
किनकि फ्लो सेलको साथ अल्ट्रासोनिक वितरक प्रणाली बन्द छ, कुनै पनि अनावश्यक वायुजनन वा फोमिंग देखा पर्दैन। अल्ट्रासोनिकेटरले शक्तिशाली र भरपर्दो, सजिलो र अपरेट गर्न सुरक्षितको फाइदा प्रदान गर्दछ, छोटो ब्याच चक्र र सरल बनावट प्रक्रियाहरू भएको। फ्लो-थ्रु सेटअपमा बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरको साथ पनि, पर्याप्त उत्पादन क्षमताहरू प्रभावकारी र लागत-कुशलतापूर्वक प्रशोधन गर्न सकिन्छ।
वैक्स Emulsion को अल्ट्रासोनिक फैलाव
मोम इमुल्सन र फैलावहरू ठीक र स्थिर मोम कणहरूले बनेको बनाउँछन्, पानीमा एकरूपतापूर्वक वितरण गरिन्छ। जब एक धेरै सजातीय ड्रपलेट वितरणको साथ मोम नानो ड्रपलेटको रूपमा छरिएको हुन्छ, एक स्थिर मोम पायस प्राप्त हुन्छ। अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजरहरूले तीव्र कतरनी सेनाहरू उत्पादन गर्छन् र विश्वसनीय मोम न्यानो-इम्ल्शन्स उत्पादन गर्न भरपर्दो र बलियो वितरण प्रणाली हुन्।
अल्ट्रासोनिक मोम पायसीकरणको बारेमा बढी पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक डिप्रेसर ग्लास फ्लो सेलको साथ रातो रंगको समरूपता प्रदर्शन गर्न
पेन्ट सूत्रहरूको लागि अल्ट्रासोनिक उच्च-शियर होमोजिनाइजरहरू
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स होमोजाइनाइजरहरू, डिस्पेरर्स, इमुल्सिफायरहरू, र मिलहरू उच्च प्रदर्शन पेंटहरू र कोटिंग्सको औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। गहन अल्ट्रासाउन्ड फ्रिक्वेन्सी उर्जाको साथ, अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजर्सले धेरै उच्च कतराहरू, टर्बुलेन्स र विनाशकारी शक्तिहरू सिर्जना गर्दछ। यी असाधारण तीव्र गहन अल्ट्रासोनिक शक्तिहरूले जोड्दछन् ठोस तरल पदार्थको स्लरीहरूमा आवश्यक प्रभाव र चाहिने आकार र कार्यक्षमतामा मिल कणहरू वितरण गर्न।
उच्च-ठोस लोडि Highको अल्ट्रासोनिक मिलिंग
अल्ट्रासोनिक इनलाइन प्रणाली सजीलै धेरै धेरै ठोस सांद्रता ह्यान्डल गर्न सक्छन्। जबसम्म स्लरीको कण लोडि pump पम्प हुने योग्यको दायरामा हुन्छ र अल्ट्रासोनिक फ्लो-सेलको माध्यमबाट खुवाउन सकिन्छ, हिल्सचरको औद्योगिक अल्ट्रासोनिक होमोगनिराइर्सले कुनै पनि प्रकारको अत्यधिक चिपचिपा, टाँसिएको जस्तो स्लरीहरूलाई विश्वसनीय रूपमा प्रक्रिया गर्न सक्छ। अल्ट्रासोनिक वेट-मिलिंग सामान्यतया माइक्रोन- र न्यानो-साइज पिग्मेन्टको मास्टर ब्याचहरू तयार पार्न प्रयोग गरिन्छ। घर्षण कणहरूको पनि त्यस्ता उच्च ठोस लोडि .हरू ह्यान्डल गर्ने क्षमता अल्ट्रासोनिक उच्च-शियर होमोजिनाइजर्सलाई पिग्मेन्ट्स र न्यानो-कणहरूको सबैभन्दा प्रभावकारी र दक्ष मिलिंग टेक्नोलोजी बनाउँदछ।
अल्ट्रासोनिक ट्याank्क एगिटेटरहरू र फ्लो-थ्रु रियाक्टरहरू
पेन्ट फॉर्म्युलेसनहरू खुला ट्याks्की वा ब्याचहरूमा मिसिन सकिन्छ, जसमा एक वा बढी अल्ट्रासोनिक प्रोब घुसाइएको छ। हिलस्चर SonoStation (चित्र बायाँ हेर्नुहोस्) को सेटअपको प्रयोग गरी खुला कन्टेनर मिक्सि low कम-मध्यम-चिसो फार्म्युलेसनको मध्यम आकारको खण्डहरू फैलाउनको लागि एक आदर्श सेटअप हो। उच्च भोल्युम थ्रुपुटको लागि, मिलिंगको तीव्र अनुप्रयोगहरू र प्राथमिक कणहरू तोड्नको साथै उच्च-चिपचिपा स्लरीहरू र टाँस्नहरूका लागि, एक प्रेसराइजेबल अल्ट्रासोनिक रिएक्टर छनौटको सेटअप हो।
ट्यांक जस्ता खुला पात्रलाई न त दबाब दिन सकिन्छ र न यो ठूलो र / वा अत्यधिक चिपचिन्ह भोल्युमहरूको वर्दी प्रक्रियाको लागि आदर्श हो। एक अल्ट्रासोनिक प्रवाह-माध्यम रिएक्टर धेरै बारमा दबाव दिन सकिन्छ। Sonication समयमा दबाब लागू गर्न ध्वनिक cavitation तीव्रता र यसैले कतरन सेना र अल्ट्रासाउन्ड को प्रभाव / मिलिंग / homogenizing प्रभाव तीव्र गर्दछ। एकै साथ सबै र paint वा पिगमेन्टहरू एकैसाथ रिएक्टरमा खुवाइन्छन्: एउटै निवास समय भएको र ठीक त्यस्तै अल्ट्रासोनिक अवस्थाहरूमा प्रशोधन हुँदै, एक धेरै सजातीय फैलाव / मिलिंग परिणाम प्राप्त हुन्छ। गहन अल्ट्रासोनिक शक्तिहरू अन्तर्गत धेरै समान उपचारले उत्कृष्ट र superior्ग उत्पादनहरूमा परिणाम दिन्छ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरको पूर्ण दायरा प्रदान गर्दछ ट्या tank्क र रिएक्टर सेटअपको साथ तपाईलाई तपाईंको पेन्ट उत्पादनको लागि आदर्श अल्ट्रासोनिक फैलाउने उपकरणहरू प्रदान गर्दछ।
प्रत्येक उत्पादन क्षमताको लागि अल्ट्रासोनिक Dispersers
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उत्पाद दायराले प्रति घण्टा ट्रक भारहरू प्रशोधन गर्ने क्षमतासहित बेन्च-टप र पायलट प्रणालीहरूमा कम्प्याट ल्याब अल्ट्रासोनिकरेटरहरूबाट पूर्ण-औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूको पूर्ण स्पेक्ट्रम कभर गर्दछ। पूर्ण उत्पाद दायराले हामीलाई तपाईंको पेन्ट फॉर्म्युलेसनहरू, प्रक्रिया क्षमता र उत्पादन लक्ष्यहरूको लागि तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक वितरक प्रस्ताव गर्न अनुमति दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक बेन्चटप प्रणाली सम्भाव्यता परीक्षण र प्रक्रिया अनुकूलनको लागि आदर्श हो। स्थापित प्रक्रिया प्यारामिटरहरूमा आधारित रैखिक स्केल-अपले प्रोसेसिंग क्षमताहरू साना लटबाट पूर्ण रूपमा व्यावसायिक उत्पादनमा बढाउन धेरै सजिलो बनाउँदछ। अप-स्केलि either या त अधिक शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक वितरक इकाई स्थापना गरेर वा समानान्तर रूपमा धेरै अल्ट्रासोनिकेटर क्लस्टर गरेर गर्न सकिन्छ। UIP16000 को साथ, हिल्सचर विश्वव्यापी सबैभन्दा शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक वितरक प्रदान गर्दछ।
सबै हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य छन् र यसरी उत्पादनमा भरपर्दो कार्य घोडाहरू। आयाम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर हो जसले अल्ट्रासोनिक फैलाउने र पिग्मेन्ट पेस्टहरू, पेन्ट्स र पोलीमरहरूको गीला-मिलिंगको दक्षता र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्छ।
सबै Hielscher Ultrasonics’ प्रोसेसरहरू आयाम को सटीक सेटिंग को लागी अनुमति दिन्छ। सोनोट्रोड्स र बूस्टर सी accessoriesहरू सामानहरू हुन् जसले विशाल परिमाणमा परिमाण परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। हिल्सचरको औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू धेरै उच्च आयामहरू वितरण गर्न र अनुप्रयोगहरूको माग गर्नको लागि आवश्यक अल्ट्रासोनिक गहनता प्रदान गर्न सक्छ। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै निरन्तर २ 24/7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ। उच्च आयाम अत्यावश्यक हुन्छ जब यो उच्च-पावर अल्ट्रासाउन्ड अनुप्रयोगहरू जस्तै न्यानो-फैलाव, नानो-कण संश्लेषण, प्राथमिक कणहरूको मिलि and्ग र मिनी-इम्ल्शन्सको लागि आउँदछ।
सटीक आयाम सेटिंग्स र स्मार्ट सफ्टवेयर मार्फत अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरूको स्थायी अनुगमनले तपाईंलाई सबैभन्दा रेट्रो अल्ट्रासोनिक अवस्थाहरूमा तपाईंको पिग्मेन्ट्स र पाउडर स्लरीहरू उपचार गर्ने मौका दिन्छ। उत्तम फैलाव परिणामको लागि इष्टतम Sonication!
अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा रैखिक मापन गर्न सकिन्छ। यसको मतलव तपाईले ल्याब वा बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरको प्रयोग गरेर प्राप्त गर्नुभएको प्रत्येक परिणामको रूपमा, उही उस्तै प्रक्रिया प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर ठीक उही आउटपुटमा मापन गर्न सकिन्छ। यो जोखिम मुक्त सम्भाव्यता परीक्षण, प्रक्रिया अनुकूलन र वाणिज्यिक निर्माणमा पछिको कार्यान्वयनको लागि अल्ट्रासोनिकेसन आदर्श बनाउँदछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कसरी Sonication तपाईंको पेंट र pigment उत्पादन सुधार गर्न सक्छन्।
पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको र पारिवारिक रूपमा सञ्चालित व्यवसायको रूपमा, हिल्सचरले आफ्नो अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूको लागि उच्च गुणस्तरको प्राथमिकतालाई प्राथमिकता दिन्छ। सबै अल्ट्रासोनिकेटरहरू बर्लिन, जर्मनीको नजिक टेल्टोमा रहेको हाम्रो मुख्यालयमा डिजाइन, निर्माण र राम्ररी परीक्षण गरीएको छ। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको दृढता र विश्वसनीयताले यसलाई तपाईंको उत्पादनको काम घोडा बनाउँछ। २ load/7 अपरेशन पूर्ण लोड र माग वातावरणमा सञ्चालन हिल्सचरको उच्च प्रदर्शन प्रदर्शन गर्नेहरूको प्राकृतिक विशेषता हो। यसले हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणलाई एक विश्वसनीय काम उपकरण बनाउँदछ जसले तपाईंको र paint्ग प्रशोधन आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
के विचलन र Emulsion बीच फरक छ
फैलाव को परिभाषा:
A फैलिएको छ एक त्यस्तो प्रणाली हो जसमा एक सामग्रीको वितरित कणहरू अर्को सामग्रीको लगातार चरणमा तितरबित हुन्छन्। दुई चरणहरू वस्तुको एकै वा फरक राज्यमा हुन सक्छन्।
विभिन्न प्रकारका फैलावहरू छुट्याईन्छ। भिन्न कारकहरू उदाहरणका लागि निरन्तर चरणको कणहरूको सम्बन्धमा तितरबित कणहरूको कण आकार अनुपात हो, वर्षा हुन्छ वा हुँदैन, र ब्राउनियन गतिको उपस्थिति। सामान्यतया, अवसादनको लागि पर्याप्त मात्रामा कणहरूको फैलावलाई निलम्बन भनिन्छ, जबकि साना कणहरूको तीलाई कोलोइड र समाधान भनिन्छ। इम्शन एक विशेष उप-प्रकारको फैलावट हो, जहाँ दुई प्रतिरोधात्मक तरल पदार्थ (एकै राज्यका दुई चरणहरू) एक अर्कामा फैलिन्छन्।
पायस को परिभाषा:
इम्युसन कम्तिमा दुई अमिस्कृत तरल पदार्थको तरल प्रणाली हो, जहाँ एक तरल पदार्थलाई अर्को सानो सोंचाको रूपमा फैलाइन्छ। सानो, वितरित बूँदको चरणलाई बिखेरिएको वा आन्तरिक चरण भनिन्छ, जबकि अन्य चरणलाई निरन्तर वा बाह्य चरण भनिन्छ। त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका इम्‍ल्शन्स छन्, जुन बीच छुट्याइएको छ: तेल-इन-वाटर (ओ / डब्ल्यू) र वाटर-इन-तेल (डब्ल्यू / ओ) पायस। तेल-इन-वाटर (ओ / डब्ल्यू) इमुल्शनमा, आन्तरिक चरण एक तेल वा तेल मिसिबल तरल हो, र बाह्य चरण पानी वा एक पानी मिसिबल तरल हो। वाटर-इन-तेल (डब्ल्यू / ओ) इमल्शनमा, आन्तरिक चरण पानी जस्तै तरल हो, जबकि बाह्य चरण तेल जस्तो तरल पदार्थ हो।